၂ဝ၁၇ - ၁၈ခုနှစ် ဒုတိယခြောက်လပတ် အခွန်ရရှိမှု ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ် ကာလတူထက် ဘီလီယံ၂ဝဝကျော် လျော့နည်း - Yangon Media Group
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၆
၂ဝ၁၇- ၂ဝ၁၈ခု ဘဏ္ဍာနှစ် ဒုတိယ ခြောက်လပတ် အခွန်ကောက်ခံရရှိမှုသည် ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ခုနှစ်ကာလတူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ကျပ် ၂၂၉ဒသမ ၂၉၅ ဘီလီယံလျော့နည်းခဲ့ကြောင်း စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းကပြောသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့အစည်းများ၏ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ် ဒုတိယခြောက်ပတ်အခွန် ကောက်ခံရရှိမှုအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၂၆ရက် ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြရာ၌ ယင်းကဲ့သို့ပြော ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက ”၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ခုနှစ် ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်တစ်နှစ်လုံးအတွက် အခွန် အကောက်ခံရငွေ လျာထားချက် ပြုပြင်ပြီး ခန့်မှန်းခြေစာရင်းအရ ကျပ် ၇၅၄၆ ဒသမ ဝ၃ဝ ဘီလီယံဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဒုတိယခြောက်လပတ်အတွက် အခွန် ကောက်ခံရန်လျာထားချက်သည် ကျပ် ၄၉၉၂ ဒသမ ၃၄၆ ဘီလီယံဖြစ်ကာ ကောက်ခံရရှိမှုသည် ကျပ်၄၃၄၄ ဒသမ ၆ဝ၉ဘီလီယံဖြစ်သဖြင့် အ ကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၈၇ ဒသမ ဝ၃ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်၍ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဒုတိယခြောက်လပတ်နှင့်နှိုင်း ယှဉ်ကြည့်လျှင် ကျပ်၂၂၉ဒသမ၂၉၅ ဘီလီယံလျော့နည်းခဲ့ကြောင်း တွေ့ ရှိရပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူကောက်ခံသည့် အခွန်ခြောက်မျိုးအတွက် အခွန် ကောက်ခံရန်လျာထားချက် ကျပ် ၄၄၅၂ ဒသမ ၂၄၁ဘီလီယ၊ံ ကောက် ခံရရှိမှု ကျပ် ၃၅၈၈ ဒသမ ဝ၆၉ဘီလီယံ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှု ၈ဝဒသမ ၅၉ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး အ ခြားပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရှစ်ခု မှ ကောက်ခံရရှိသည့် အခွန်၁၅မျိုး အတွက် လျာထားချက် ကျပ်၅၄ဝ ဒသမ ၁ဝ၅ ဘီလီယံ ကောက်ခံရရှိ မှု ကျပ် ၇၅၆ ဒသမ ၅၄ဝဘီလီယံ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်း ၁၄ဝ ဒသမ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ် ကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေး နှစ် ဒုတိယခြောက်လပတ် အခွန် ကောက်ခံရရှိမှုလျာထားချက် ပြည့်မီ ကျော်လွန်အောင် ကောက်ခံရရှိသည့် အခွန်အကောက်အမျိုးအမည် ၁ဝ မျိုးရှိပြီးလျာထားချက်ကို မပြည့်မီသည့် အခွန်အကောက်အမျိုးအမည် ၁၁မျိုးရှိကြောင်း သိရသည်။
ကဏ္ဍအလိုက် အခွန်ကောက်ခံရရှိမှုမှာ ပြည်တွင်းထွက်ကုန်နှင့် ပြည်သူပြည်သားများသုံးစွဲမှုအပေါ် တွင်ကောက်ခံသည့် အခွန်အကောက် ကျပ် ၂၁၇၉ ဒသမ ဝ၆၂ ဘီလီယံ၊ ဝင်ငွေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် ကောက်ခံသည့် အခွန်အကောက် ကျပ်၁၂၇ဝ ဒသမ ၆၂၅ဘီလီယံ၊ အကောက်အခွန် ကျပ် ၃၁၂ဒသမ၉၂၈ဘီလီယံ၊ ၁၂၇ ဒသမ ၇၃ရာခိုင်နှုန်းနှင့် နိုင်ငံ ပိုင်သယံဇာတများ ထုတ်ယူသုံးစွဲမှု အပေါ်မှာကောက်ခံသည့် အခွန်အ ကောက် ကျပ် ၆၄၁ ဒသမ ၉၉၄ ဘီလီယံ၊ ၁၅၂ ဒသမ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းတို့ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာ ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦး မောင်မောင်ဝင်းက ပြောသည်။
စစ်တမ်းများအရ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်က ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများအနက် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် သက်??
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ မိုင်းတြုံ
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံသားများ ပိုင်ဆိုင်သော ဟိုတယ်များကို သပိတ်မှောက်မှုတွင် အဆိုတော် အယ်လ်တန်ဂ?
မြန်မာ့ဂီတ ဂန္ထဝင်တေးသံရှင်ကြီး ဦးမင်းနောင် ကွယ်လွန်